क्रेते को सुन्दर टापुमा तेस्रो ठूलो शहर, दाँया मा ग्रीस मा सबै भन्दा बस्तियों सूची हो। सांस्कृतिक गतिविधिहरु प्रेमीहरूलाई लागि आकर्षण को एक विशाल विविधता छ। पुरानो टाउन को उत्कृष्ट मध्ययुगीन वास्तुकला, भव्य चर्च, को भेनिस शैली मा निर्मित, पडोस क्याथोलिक चर्च र तुर्क मस्जिदों, अविश्वसनीय सुन्दर फोहराहरू - यो सबै Rethymno को केवल एक मा देख्न सकिन्छ।
परिदृश्य सुखदायक र सुगन्धित वनस्पति मा ट्रयाक घुमावदार माहौल मा - एक पटक शहर बाहिर, पर्यटक एक पूर्ण बिभिन्न संसारमा जस्तै आउनुहोस्। रेथिनन देखि तेह्र किलोमिटर, एउटा सानो समुद्र तटीय गाउँ हो क्रेते को उत्तरी तट मा झूट। यो Scaleta को एक गाउँ हो, यो बच्चाहरु संग परिवार को लागि एक आदर्श स्थान मानिन्छ। यो प्रयास र bustle देखि, समुद्र तट मा एक तनावमुक्त वातावरणमा आफ्नो छुट्टी खर्च गर्न रुचि टाढा जो सूर्य caressing, केवल नीला समुद्र घेरिएको, ती द्वारा र क्रेते को सबै अद्भुत द्वीप दिन्छ जो आश्चर्यजनक वातावरण, को चुनिएको थियो।
Skaleta वस्तुतः कुनै पनि राति जीवन। यसबाहेक, किनमेल जाने वा बस हल्ला बारमा बस्न चाहने मुख्य रूप बस मा, या ट्याक्सी वा भाडामा कार द्वारा प्राप्त गर्न सक्छन् जहाँ छिमेकी सहर, जानुहोस्। थुप्रै तरिकामा यो स्थान लोकप्रियता धन्यवाद यसको बलौटे समुद्र तट गर्न, लगभग एक किलोमिटर, साथै धेरै होटल stretching, प्राप्त छ तट साथ स्थित छ। तिनीहरूलाई को एक Gortyna होटल3* (ग्रीस, Skaleta) छ। Crete, रेथिनन, जो, र बारेमा यो हाल को वर्ष मा एउटा सानो गाउँ हो विशेष मा, एक धेरै लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य भएको छ। रूस, यहाँ आफ्नो बिदा खर्च चयन जो पहिलो लाइनमा छन् होटल गर्न रुचाउँदैनन्। र तिनीहरूलाई को एक Gortyna होटल3छ *।
होटल 2002 का खोलिएको थियो। तब देखि हरेक दुई वर्ष यो redecorating आयोजित। Gortyna होटल3* अन्तिम प्रमुख नवीकरण को 2015th लागू भएको थियो। यो अपेक्षाकृत सानो, तर राम्रो लाग्यो-बाहिर रात हेरविचार विशेषज्ञ कर्मियों गर्न बिहान देखि span जो क्षेत्र छ। यसबाहेक, हरेक बिहान क्लोरीन समाधान संग disinfected समीक्षा देखि न्याय, सबै संगमरमर ट्र्याक।
सामान्य मा, शुद्धता छैन होटल को मात्र फाइदा Gortyna होटल3* (। क्रेते को) छ। Rethymno - एक ठूलो बंदरगाह शहर जहाँ तपाईं प्राचीन सडकमा, रेस्टुरेन्ट र रात्रि क्लब मार्फत हिंड्न सक्छौं, उपहार किन्न। बन्दोबस्त दस मिनेट ड्राइभ स्थित छ। शहर बस स्टप इलाका गर्न प्रवेश मा सिधै स्थित छ। टिकट खरिद गर्न सकिन्छ चालक रूपमा र दर्ता डेस्क मा होटल वा नजिकका किराना पसलहरुमा। यो भाडा Rethymno शहर को बस स्टेशनमा 1.8 यूरो छ।
होटल Gortyna होटल3* (ग्रीस), मा सत्तरी किलोमिटर टाढा Heraklion मा स्थित छ, बहुमत सकारात्मक छन् जो को स्थान, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बारेमा समीक्षा। स्थानान्तरण समय अघिल्लो स्टप मा तल आउँदै पर्यटक संख्या आधारमा, दुई र आधा घण्टा लगभग छ। यो बच्चाहरु, खराब स्थानांतरण सडक संग होटल आउन गर्नेहरूका लागि धेरै सुविधाजनक छैन। जबकि धेरै दम्पतीले यो वास्तवमा बेवास्ता, जसको लागि Gortyna होटल3* को टिकट बेचिएको एक सुविधाजनक स्थान र किफायती मूल्य रुचि। O. क्रेते (Rethymno, Heraklion, Chania र अन्य शहर र रिसोर्ट को सहर) यसको धेरै आकर्षण लागि प्रसिद्ध छ। तिनीहरूले होटल मा यात्राहरु खरीद को स्वागत मा, देख्न सकिन्छ, र नजिकै जो धेरै कार्यालय को एक।
म यस होटल मा प्रस्तावको सेवाहरूको सूची केही भन्न पर्छ। यो Gortyna होटल3* (क्रेते) एक कम श्रेणी छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। यद्यपि, यसको पूर्वाधार पूर्णतया तीन तारे होटल अनुरूप छ।
एक सानो निःशुल्क पार्किङ, घडी डेस्क, लाँड्री सेवा, इन्टरनेट कुना, एक एम्पिथियटर, एक भाडाको कार, भ्रमण डेस्क, सामान भण्डारण र डिपजिटरी सुरक्षित, राम्रो एनिमेसन काम राउन्ड - यो Gortyna होटल3* (ग्रीस, क्रेते) प्रस्ताव गरिएको छ भनी सबै सेवाहरू छ । Rethymno केही मिनेट, दूर स्थित छ जसले सक्रिय बिदा रुचि ती लागि एक महान समाधान छ। शहर क्लब र रेस्टुरेन्टमा भरिएको छ, त्यहाँ पनि पानी पार्क र मनोरञ्जन को अन्य ठाउँहरूमा छ।
तर होटल इलाका सधैं शान्त छ। उहाँले एक शान्त र मापन बाँकी रुचि गर्नेहरूलाई रोजेका थियो किन कि छ। को स्वागत मा एक फिर्ती शटल सुरक्षित नगर्ने पर्यटकहरु यस सेवाको लागि एक अतिरिक्त शुल्क लागि आदेश गर्न सकिन्छ।
unscheduled समयमा Gortyna होटल3* (ग्रीस) मा आउन गर्नेहरूले सधैं उपलब्धता विषय छिटो बस्ती गणना गर्न सक्नुहुन्छ। होटल नीति अनुसार, साँचाहरू दुई बजे मा जारी छन्। र संख्या दिउँसो हुन जारी। तैपनि, होटल र बस्ती र कोठा परिवर्तन बारेमा पर्याप्त लोकतान्त्रिक नीति छ। यो Gortyna होटल3* पहिले नै आराम छन् जो ती द्वारा प्रमाणित छ। समीक्षा सम्भव छ भने, अतिथि स्थानान्तरण सम्म कोठा मा रहन अनुमति भन्छन्।
भर सज्जित ramps: होटल विकलांग मान्छे को लागि सबै प्रदान गर्दछ। साथै, त्यहाँ राम्रो असक्षम शौचालय लागि सुसज्जित संग विशेष कोठा छन्। होटल को नियम अनुसार यो पाल्तु जनावर संग बाँच्न सम्भव छ। प्रवेश प्रतिबन्ध मात्र केही संख्या लागू हुन्छ। कुकुर वा बिरालो को निर्धारित आगमन अग्रिम रोकियो गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई। बुकिङ लागि प्राप्त को सहमति मात्र सम्भव छ।
होटल Gortyna होटल3* (। क्रेते, Rethymno को) पूर्व व्यवस्था मा उपलब्धता विषय हो जो जडान कोठा, प्रदान गर्दछ। नगद भुक्तानी एक हजार पाँच सय यूरो भन्दा बढी हुन सक्दैन। अग्रिम थाहा यो आवश्यकता, Gortyna होटल3मा बसे *। ग्रीस, क्रेते सहित, नगद मा भुक्तानी विनियमन विशेष व्यवस्था अपनाए।
यो सम्पत्ति सत्तरी कोठा प्रदान गर्दछ। ती सबै एक मानक श्रेणी र एक, दुई वा तीन मान्छे को आवास को लागि प्रदान गरिन्छ। यो अपार्टमेन्ट एकदम विशाल र प्रकाश, आधुनिक र आरामदायक फर्नीचर शुद्ध काठ बनेको संग सुसज्जित छन्। मानक एकल वा दोहोरो बेड बाहेक therein कोठा को प्रकार आधारमा, सजिलै एक ताजा स्थिति मा परिवर्तित छ जो एक सोफा, रूपमा। फर्नीचर को बिस्तर टेबल, सामान रैक, दराज, डेस्क, कुर्सियों छ। सबै कोठा अघि तपाईंले सेतो प्लास्टिक तालिका र कुर्सियों स्थापित जो एक बालकनी छ। को साँझमा यहाँ बसिरहेका, तपाईं समुद्र वा अद्भुत भित्री बगैचा को अनन्त expanse आनन्द उठाउन सक्छौं।
फर्नीचर साथै, कोठा पनि उपग्रह च्यानल संग एक टिभी, दुई रूसी देखाउन छन्, एक फ्रिज र एक म्यानुअल नियन्त्रण वातानुकूलन, टेलिफोन - प्रत्यक्ष डायल, रेडियो। निर्मित सानो सुरक्षित प्रयोग लागि, प्रति दिन दुई यूरो दर्ता डेस्क मा भुक्तानी गर्न छ।
सबै कोठा सूथिंग प्यास्टेल रंग मा सजाया छन्। को बालकनी मा आवश्यक भएमा बाक्लो पर्दे बन्द गर्न सकिन्छ भनेर एक ठूलो गिलास स्लाइड ढोका छ। पर्दे र bedspreads एक रंग मा डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। तल्ला विशेष disinfectants, कीरा विकर्षक संग दैनिक साफ छ जो चीनी माटो टाइल छ। कोठा जीवित लागि एक सुविधाजनक समयमा दिनहुँ सफा छन्। बाथरूम संयुक्त छन्। तिनीहरूले वर्षा प्रदान गर्नुहोस्। एक हेयर ड्रायर र सबै आवश्यक सामान, सँगै तौलिया संग दैनिक अपडेट जो पनि छ। दुई पटक यो होटल एक हप्ता मा ओछ्यान तन्ना को परिवर्तन।
होटल Gortyna होटल3* (क्रेते) दुई अवधारणाहरु मा काम गर्दछ: "कन्टिनेन्टल नास्ता" र "सबै समावेशी"। , समीक्षा, यहाँ खाना द्वारा न्याय हुनत धेरै विविध, तर हार्दिक छैन।
नास्ता, सामान्यतया सेवा muesli र मह, जाम र मुरब्बा, ग्रीक दही, पनीर को धेरै किसिमहरु, क्यान्ड आडू वा भुईँकटर, छम, ससेज, घिउ, घरेलु पनिर, खट्टे क्रीम, muffins दुई वा तीन प्रकारका लागि, भद्रगोल र अन्डा उसिनेर। कफी, चिया र दूध एक मेसिन उपलब्ध छन्।
खाजा र खाने लागि ब्रोकोली, मशरूम र भात, चिकन, माछा, र आइसक्रिम र पेस्ट्री केही व्यञ्जन सहित धेरै पक्ष व्यञ्जन, एक खान सक्छ। राति, सूप-puree एक प्रकारको सेवा गरे।
हप्ताको एक पटक, "सबै समावेशी" को अवधारणा खान्छन् गर्नेहरूलाई समुद्री भोजन, झिंगा र अक्टोपस मासु सहित प्रदान गर्दछ। सधैं वर्तमान रस, साथै रक्सी को दुई प्रकार - रातो र सेतो।
"सबै समावेशी" भुक्तानी गर्ने गरेको छ, पट्टी पूल वरिपरि चलिरहेको, दस बिहान दस सम्म राति ती मुक्त हुन सक्छ र असीमित मात्रा मा बियर सहित स्थानीय उत्पादकहरु देखि पेय प्राप्त गर्न।
कोर गर्न साथै, होटल एक लबी रेस्टुरेन्ट परम्परागत ग्रीक भोजन गर्दछ। Gortyna होटल3* को क्षेत्र मा एक उत्कृष्ट वाइन सूची संग एक खाजा पट्टी रूपमा काम गर्छ। होटल मा छैनन् खाना सन्तुष्ट गर्नेहरूले नजिकका taverns मध्ये एक मा खान सक्छ।
समुद्र तट Gortyna होटल3* (ग्रीस)
क्रेते (रेथिनन), प्रारम्भिक गर्मी मा विशेष गरी सुन्दर पर्यटक बहुमत राम्रो जसमा रहन, समीक्षा, जब त्यहाँ यस्तो तातो मौसम छ, तर पर्याप्त पहिले नै Sunbathing र पौडी सहज। यस समयमा, त्यहाँ धेरै आगंतुकों छन्, तर मूल्य अझै छ किनभने उच्च रूपमा।
पहिलो लाइन मा निर्मित द्वीप को होटल को धेरै। कुनै अपवाद र Gortyna होटल3* (। क्रेते, Rethymno को) छ। यो सडक मार्फत समुद्र तट मा स्थित छ। केही नजिकै पछि, वा बिस्तारै ट्रयाकको मार्फत बाटो मुन्तिरबाट गएको अर्को बाटो मार्फत केही मिनेट लागि किनारमा हिंड्न। समुद्र तट एक बलौटे सतह छ। यहाँ पानी मा राम्रो प्रविष्टि छ। तपाईं होटल को बायाँ एक सानो हिंड्न भने, तपाईं, हुनत धेरै सहज छैन एक जंगली समुद्र तट, जहाँ धेरै कम मान्छे मा प्राप्त गर्न सक्छन्। सानो पत्थर विशेष जुत्ता बिना गर्न कठिन हुनेछ को एक मीटर बारेमा पारित हुनुपर्छ पानी प्रवेश गरेसँगै।
यो होटल मा रहन समुद्र तट आनन्द र एक पाँच तारे "Creta शाही" को पैदल दूरी स्थित गर्न सक्नुहुन्छ। तर, sunbeds र छाते यहाँ को लागि, निजी स्नान क्षेत्र Gortyna होटल यसको विपरीत, भुक्तानी गर्न हुनेछ।
यस होटल तपाईं सधैं छोराछोरीको हँसी सुन्न सक्नुहुन्छ यसको क्षेत्र मा परिवारको लागि एउटा उत्कृष्ट विकल्पको रूपमा प्रस्ताव भ्रमण संचालक भएकोले। यसको सानो ग्राहकहरु Gortyna होटल3लागि * (। क्रेते, Rethymno को), आमाबाबुले छोड्न जो आफ्नो पूर्वाधार मा एक रेभ एक खोक्रो पूल, खेल मैदान र खेल को लागि एक सानो क्लब छ आफ्नो रहन समीक्षा।
इच्छित भने, तपाईं कोठा मा एक मुक्त खाट प्राप्त गर्न सक्छन्। रेस्टुरेन्ट उच्च कुर्सियों छ।
होटल छ साँझ सम्म बिहान दस देखि काम, ताजा पानी संग एक ठूलो बाहिरी स्विमिंग पूल प्रबन्ध मिलाए। उहाँको वरिपरि सूर्य बेड र छाते संग छत मा। छुट्टी र खेल प्ले भएकाहरूलाई, टेनिस सामान को एक खेल को लागि सबै आवश्यक भाडामा गर्न सक्षम हुनेछ। इलाका डार्ट्स र बिलियर्ड्स छ।
मनोरञ्जन एक धेरै समुद्र तट मा प्रस्ताव गरिएको छ, तर, तपाईं तिर्न सबै सवारी लागि हो। धेरै आगंतुकों यो अद्भुत द्वीप को एक भ्रमण एक समुद्र तट छुट्टी संयोजन। र यो एक धेरै यात्राहरु Gortyna होटल3* (को। क्रेते, Rethymno) को लागि एक सुविधाजनक स्थान योगदान पुग्छ।
दुवै मुख्य भूमि र द्वीप ग्रीस भ्रमण गर्ने धेरै पर्यटकहरु, अविस्मरणीय छाप फर्कने। सामान्य मा, रूस को बहुमत यस होटल मा आफ्नो रहन मन परायो। धेरै किनभने यसको कम मूल्य को यो छनौट गरे। हाम्रो compatriots को कोठा सबैभन्दा उच्च कदर गरिन्छ: आरामदायी फर्नीचर, ठीक काम पाइपलाइन - सबै यो भ्रमण मनपराएका। निस्सन्देह, केही अझै प्रशासन चाँडै हल जो एक सानो समस्या, देखियो।
भोजन भन्दा रूस मन परायो। खाद्य तिनीहरूले लेट आए पनि जब त भोक पर्यटकहरु छोड्न भएन, ठूलो परिमाणमा आपूर्ति थियो। जवान छोराछोरीलाई विशेष गरी दुई-टोन आइसक्रिम मन परायो।
कर्मचारीहरु बारेमा समीक्षा सबैभन्दा उजुरी। सामान्य मा, क्रेते को धेरै राम्रो र न्यानो सम्झनाहरु थिए: यसको थोरै भू-मध्य जलवायु, सुन्दर Untouched प्रकृति, धनी इतिहास, मान्छे को आतिथ्य - यो सबै यो द्वीप प्रेम गिरावट बनाउन मद्दत गर्छ।
समीक्षा, किनभने यसको "दयालु" मूल्यहरु को यस होटल चयन गर्ने रूस द्वारा न्याय, धेरै सानो त्रुटिहरू बस यी सबै बेफाइदा अद्भुत समुद्र र समुद्र तट लागि क्षतिपूर्ति ध्यान छैन। भ्रमण अवधिमा तपाईं सधैं बस एक तन, प्रशस्त nakupatsya Cretan सागर न्यानो गर्न सक्छन् र साधारण आराम। Gortyna होटल3* रूसी छैनन् मा होटल "stardom" रुचि गर्नेहरूका लागि सिफारिस गरिएको हो, तर बहुमत जीवन समस्या त्यहाँ रात लामखुट्टे चिन्तित मा बाहेक कुनै पनि थिए। तर यो समस्या हल हुन्छ: तपाईँले किन्न र तपाईंलाई "raptor" लाग्न सक्छ।
छोटो मा, आफ्नो छुट्टी, धेरै सानो, तर आफ्नो विरोधीको साथ असन्तुष्ट थिए हाम्रो compatriots, एकदम धेरै, फेरि फेरि यहाँ आउन इरादा। यसबाहेक, सबै भन्दा यात्री ठूलो मूल्य मा एक राम्रो "तीन" को रूपमा यो होटल सिफारिस हुनेछ।
होटल LTI जर्बा प्लाजा Thalasso र स्पा: समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा
होटल "सम्राट्लाई" (टर्की): सबै यहाँ बाँकी छ
होटल कीव मा "पर्यटक": ठेगाना, फोन नम्बर, फोटो, समीक्षा
"KUBAN" होटल (Gelendzhik): कोठा को विवरण, समुद्र, छुट्टी, समीक्षा
सबै भन्दा ठूलो दुःस्वप्न - एक आणविक विस्फोट
Commercialism। यो गुण के हो र यसको प्रयोग के हो?
उद्धरण सन्ध्याले मोनरो जीवन र फिल्म
आधार "लामो पोखरी" (मास्को क्षेत्र): विवरण र समीक्षा
Anzhelika Volskaya: जीवनी, Filmography, जीवन को रोचक तथ्य
कम्पनी को सही संरचना र प्रभावकारी व्यवस्थापन यसको भूमिका
काठ-निकाल भट्टामा द्वारा पानी ताप। क्षेत्रीय सञ्चालन सिद्धान्त